Eurovision 2018-2019, ihe niile ịchọrọ ịma: ụbọchị, ebe na ihe ndị ọzọ! | Nye m oge ntụrụndụ
Gabriela moran | | Akụkọ egwu, Ndị na-abụ abụ, General, music
Dị ka ọ na -eme, Europe na -eme mmemme egwu egwu akpọrọ Eurovision ndị otu niile nke European Broadcasting Union (EBU) na -esonye. Ọ bụ ememme egwu kwa afọ nke ndị mmadụ kacha nwee ọnụ n'ụwa: ọ erutela ndị na -ege nde nde 600 n'ụwa niile! A na -agbasa ya na -enweghị mgbagha kemgbe 1956, yabụ na ọ bụ asọmpi telivishọn kacha ochie ma ọ ka na -arụkwa ọrụ, ọ bụ ya mere e jiri nye mmemme ahụ ihe ndekọ Guinness na 2015. N'afọ a, Eurovision 2018 mere na Altice Arena n'obodo Lisbon, Portugal na Mee 8, 10 na 12.
Ama maka ememme a maka ịkwalite ụdịrị gbaputa. N'oge na -adịbeghị anya, etinyere ụdịrị dị iche iche dịka tango, arabic, ịgba egwu, rap, rock, punk na egwu elektrọnik. Gụọ n'ihu chọpụta ihe niile mere na Eurovision 2018!
1 Isiokwu na nyocha izugbe Eurovision 2018
1.1 Agba ikpeazụ
1.2 Agba ikpeazụ
2 Eziokwu na -atọ ụtọ gbasara eurovision ...
3 Jikere maka Eurovision 2019!
Isiokwu na nyocha izugbe Eurovision 2018
Isi okwu bụ "All Aboard!" tụgharịrị n'asụsụ Spanish dị ka "Ndị niile nọ n'ụgbọ." Ndị Thematic na -ekwu maka mkpa oke osimiri na ọrụ mmiri na -anọchite anya akụkụ dị mkpa maka akụ na ụba nke mba ọbịa. Ihe nnọchianya ahụ na -anọchite anya ejula, nke na -ebunye ụkpụrụ dị iche iche, nsọpụrụ na ndidi.
Ọ bụ onye duziri mmemme a Silvia Alberto, Catalina Furtado, Filomena Cautela na Daniela Ruah. Eurovision 2018 nwere oke ntinye nke mba 43 na mkpokọta! Onye meriri bụ mba Izrel nwere abụ "Ihe egwuregwu ụmụaka" nke onye ọbụ abụ na DJ Netta Barzilai rụrụ. Edebere egwu a dịka otu n'ime ihe nrite ọkacha mmasị maka ọnwa ole na ole tupu ememme a. Ememe ọ bụla nwere mmemme mkpochapu: ọkara ọkara na nke ikpeazụ na ụbọchị niile nke ihe omume ahụ.
Tupu mmalite ememme a, ọ bụ omenala ịse ọkara ikpeazụ. N'okwu nke Portugal, Spain, Germany, United Kingdom, France na Italy nwere ngabiga akpaka na njedebel. Mba ndị ọzọ asọmpi iji merie ọnọdụ ha na semifinals abụọ na Mee 8 na 9 ebe ndị Mba iri nwere ntuli aka kacha elu na semifinal nke ọ bụla batara n'ọkwa ikpeazụ n'abalị iri na abụọ.
Ha nwere mba iri na itoolu 8 maka Mee. Ndepụta mba ndị asọmpi n'abalị ahụ nke ọkara ọkara nke Eurovision 1 bụ dị ka ndị a:
Naanị mba iri nwetara ntuli aka ha n'ikpeazụ na usoro ịtụ vootu: Israel, Saịprọs, Czech Republic, Austria, Estonia, Ireland, Bulgaria, Albania, Lithuania na Finland.
Egwu ise kacha amasị na votu ha bụ ndị a:
Ihe egwuregwu ụmụaka. Onye na -eme ihe nkiri: Netta (Israel) - isi 283
Ọkụ. Onye na -eme ihe nkiri: Eleni Foureira (Saịprọs) - 262 isi
Ghaara m ụgha. Onye na -eme ihe nkiri: Mikolas Josef (Czech Republic) - isi 232
Ọ dịghị onye ma gị. Onye na -eme ihe nkiri: Cesár Sampson (Austria) - isi 231
La Forza. Onye na -eme ihe nkiri: Alekseev (Belarus) - isi 201
Ndị 10 maka Mee na mba 18 sonyere, edepụtara ndị na -ese okwu n'okpuru:
Ogo ogo nke mba iri gara n'ihu ruo nke ikpeazụ bụ dị ka ndị a: Norway, Sweden, Moldova, Australia, Denmark, Ukraine, Netherlands, Slovenia, Serbia na Hungary.
E gosipụtara ntuli aka kacha elu nke ise na ọkara nke abụọ n'okpuru:
Otua ka I si ede egwu. Onye na -eme ihe nkiri: Alexander Rybak (Norway) - isi 266
Agbapụ Gị. Onye na -eme ihe nkiri: Benjamin Ingrosso (Sweden) - isi 254
Ụbọchị ọma m. Onye na -eme ihe nkiri: DoReDos (Moldova) - isi 235
Anyị nwetara ịhụnanya. Onye na -eme ihe nkiri: Jessica Mauboy (Australia) - isi 212
Ala Dị Elu. Onye na -eme ihe nkiri: Rasmussen (Denmark) - isi 204
Akụkụ nke nnukwu ihe ịtụnanya nke abalị a na -ewere na ọ nweghị ikike Poland, Latvia na Malta bụ ndị abụ ha so na ndị ọkacha mmasị n'ime ọnwa ndị gara aga iji gaa asọmpi ikpeazụ. N'aka nke ọzọ, Eurovision 2018 bụ mbipụta ebe Russia na Romania erughị eru dị ka ndị ikpeazụ na nke mbụ n'ime akụkọ ntolite.
Nnukwu ụbọchị nke ikpeazụ weere ọnọdụ 12 maka Mee. Ndị sonyere mejupụtara mba iri e kewara site na semifinal nke mbụ na nke abụọ, na mgbakwunye na mba isii nwere ngafe akpaka. Yabụ ngụkọta nke Ndị ikpeazụ 26 meriri na Eurovision 2018 ma ha mere nnukwu ngosi nye ndị na -ekiri ya.
Tebụl ọnọdụ maka ikpeazụ Eurovision 2018 na -atụle ndị ikpeazụ 26 bụ dị ka ndị a:
Ihe egwuregwu ụmụaka. Onye na -eme ihe nkiri: Netta (Israel) - isi 529
Ọkụ. Onye na -eme ihe nkiri: Eleni Foureira (Saịprọs) - 436 isi
Ọ dịghị onye ma gị. Onye na -eme ihe nkiri: Cesár Sampson (Austria) - isi 342
Ị hapụ m ka m jee ije naanị m. Onye na -eme ihe nkiri: Michael Schulte (Germany) - 340 isi
Amaghị m ihe kpatara ya. Onye na -eme ihe nkiri: Ermal Meta & Fabrizio Moro - isi 308
Ghaara m ụgha. Onye na -eme ihe nkiri: Mikolas Josef (Czech Republic) - isi 281
Agbapụ Gị. Onye na -eme ihe nkiri: Benjamin Ingrosso (Sweden) - isi 274
La Forza. Onye na -eme ihe nkiri: Alekseev (Belarus) - isi 245
Ala Dị Elu. Onye na -eme ihe nkiri: Rasmussen (Denmark) - isi 226
Nova Deca. Onye na -eme ihe nkiri: Sanja Ilić & Balkanika (Serbia) - isi 113
Nnukwu onye na -eme ihe nkiri: Eugent Bushpepa (Albania) - isi 184
Mgbe anyị mere agadi. Onye na -eme ihe nkiri: Ieva Zasimauskaitė (Lithuania) - isi 181
Ebere. Onye na -eme ihe nkiri: Madame Monsieur (France) - isi 173
Ọkpụkpụ. Onye na -eme ihe nkiri: EQUINOX (Bulgaria) - isi 166
Otua ka I si ede egwu. Onye na -eme ihe nkiri: Alexander Rybak (Norway) - isi 144
Ọnụ. Onye na -eme ihe nkiri: Ryan O'Shaughnessy (Ireland) - isi 136
N'okpuru ọkwa. Onye na -eme ihe nkiri: Mélovin (Ukraine) - isi 130
Iwu megidere 'Em. Onye na -eme ihe nkiri: Waylon (Netherlands) - isi 121
Anyị nwetara ịhụnanya. Onye na -eme ihe nkiri: Jessica Mauboy (Australia) - isi 99
Ngwa ngwa. Onye na -eme ihe nkiri: AWS (Hungary) - isi 93
Ndewo, ne! Onye na -eme ihe nkiri: Lea Sirk (Slovenia) - isi 64
Abụ gị. Onye ntụgharị okwu: Alfred García na Amaia Romero (Spain) - isi iri isii na otu
Oké ifufe. Onye na -eme ihe nkiri: SuRie (United Kingdom) - isi 48
Nnukwu anụ. Onye na -eme ihe nkiri: Saara Aalto (Finland) - isi 46
Ma ọ bụ Jardim. Onye na -eme ihe nkiri: Cláudia Pascoal (Portugal) - isi 39
N'etiti nnukwu atụmanya, esemokwu na ndepụta ndị ọkacha mmasị, a mara ọkwa ya nnukwu abụ mmeri n'abalị: Toy! DJ na onye na -agụ egwu na Netta rụrụ ya na akara ncha. Omume ya lekwasịrị anya n'ọdịbendị ndị Japan, nke butere esemokwu mgbe ọ nwara ime omenala ndị Japan kwesịrị ekwesị ebe ọ bụ na ejiji, edozi isi na etemeete sitere na omenala Japan.
Eziokwu na -atọ ụtọ gbasara eurovision ...
Na mgbakwunye na ebubo maka arụmọrụ Netta Barzilai, enwere omume ndị ọzọ nyere ọtụtụ ihe ikwu maka n'oge ikpeazụ. Nke ahụ bụ ikpe nke Ihe ngosi SuRie, nke onye na -akwado ya mere ihe nkiri wee were igwe okwu iji kwupụta ụfọdụ echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya, e mechara mata onye ahụ dịka onye ndọrọndọrọ ọchịchị. Kọmitii ahụ nyere SuRie ka ọ rụgharịa ọrụ, agbanyeghị onyinye a jụrụ, ihe ngosi ahụ gara n'ihu na usoro edepụtara.
N'aka nke ọzọ, China katọrọ ụfọdụ akụkụ nke mmemme ndị asọmpi n'ihi na ha gosipụtara akara ma ọ bụ egwu nke zoro aka na mmekọ nwoke na nwoke. n'oge semifinal mbụ nke Eurovision 2018. Ebumnuche kpatara EBU kwụsịtụrụ nkwekọrịta ya na ụlọ ọrụ dị na mba ahụ site n'ịrụ ụka na ọ bụghị otu onye mmekọ kwekọrọ n'ụkpụrụ ngụkọta nke ezubere ịkwalite ma mee ememme site na egwu. Ihe si na ya pụta bụ nkwụsị nke nnyefe nke semifinal nke abụọ na nnukwu ikpeazụ na mba ahụ.
Jikere maka Eurovision 2019!
Anyị nwere Israel dịka onye ọbịa ọzọ anyị! Israel ejewo ozi dị ka obodo ọbịa ugboro abụọ: na 1979 na 1999.
Ndị EBU kwupụtara na Septemba 13, 2018 na obodo ga -eme emume a ga -abụ Tel Aviv maka Eurovision 2019. Ọ ga -eme n'ụbọchị Mee 14, 16 na 18 na International Convention Center (Expo Tel Aviv).
Asọmpi a ga -ewere ọnọdụ na Pavilion 2 nke International Convention Center nke nwere ikike ihe dị ka puku mmadụ iri. N'iburu eziokwu a n'uche, Eurovision 2019 ga -enwe ikike pere mpe karịa mbipụta gara aga na Lisbon. Agbanyeghị, otu n'ime akwụkwọ akụkọ kacha mkpa na Israel kwupụtara nke ahụ naanị tiketi puku anọ ga -aga ahịa. Nke a, n'ihi na oghere nke puku mmadụ abụọ ga -egbochi igwefoto na ogbo, ebe a ga -edobe nke ọzọ maka European Broadcasting Union.
N'ozuzu ire tiketi na -amalite n'etiti ọnwa Disemba na Jenụwarị. Ọ dị mkpa ịtụle na onye nkesa na ọnụ ahịa na -adịgasị kwa afọ, yabụ na ị ga -ama maka ozi ọ bụla. Ọnụahịa etiti na-enwe nkezi na -efu euro 60 maka semifinal ọ bụla na euro 150 maka asọmpi ikpeazụ.
Enwela obi nkoropụ ma ọ bụrụ na ịnwetaghị tiketi gị na agba nke mbụ ma ọ bụ nke abụọ. Ebe ọ bụ na n'ụdị ihe omume a, enwere ike idobe tiketi maka ụbọchị dị nso na mmemme ahụ maka ebumnuche ire ahịa iji bipụta ihe omume na '' erepụla '' ma ọ bụ '' erepụla ''. Agbanyeghị, iji nwekwuo ohere ịga asọmpi ahụ, ọ bụ Ọ dị mma isonye na klọb ndị na -akwado Eurovision n'ihi na ha nwere nnukwu tiketi maka ndị otu ha. Ebe ahụ na -adịkarị nso na ogbo!
Gal Gadot, onye ama ama n'Izrel a kpọrọ oku ka ọ bịa nabata Erurovisión 2019, enwetabeghị isonye ya.
Enwere obodo atọ enwere ike rụọ ọrụ onye ọbịa: Tel Aviv, Eilat na Jerusalem, nke ikpeazụ sonyere dị ka ebe mgbakọ n'oge abụọ gara aga emere ememme ahụ n'otu mba. Ndị nhazi ihe omume a na -ekwusi ike na Tel Aviv kwekọrọ na obodo nwere atụmatụ kacha mma maka mmemme ahụ, n'agbanyeghị na atụmatụ niile bụ ihe nryomi. Ka ọ dị ugbu a ememme a ntinye mba 30.
N'aka nke ọzọ, enwere ụfọdụ ngagharị iwe megide Israel dịka ebe a ga -eme asọmpi a. Israel chere ihu a ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike, nke mere na isi ihe kpatara nghọtahie a bụ ndọrọndọrọ ọchịchị ya na omume ndị o mere megide mba ndị ọzọ. Mba ndị dịka United Kingdom, Sweden na Iceland na -atụle na ijide Eurovision na mba ahụ bụ mmebi nke ikike mmadụ ma tụọ aro ka ewepu ya na mmemme ahụ.
Ọzọkwa, ihe EBU ewepụtala nkwupụta gọọmentị na -ekwupụta na nchekwa nke ihe omume ahụ bụ ihe kachasị mkpa maka atụmatụ ịga n'ihu n'ụzọ ha. A na -atụ anya na praịm minista ga -ekwe nkwa nchekwa n'akụkụ niile, yana nnwere onwe ngagharị ka ndị egwu niile chọrọ wee nwee ike ịga emume a n'agbanyeghị mba ha si. Ha na -atụle nkwanye ugwu ahụ maka ụkpụrụ nke nsonye na icheiche bụ ihe dị mkpa na mmemme Eurovision a ga -asọpụrụkwa ya site na mba ndị ọbịa niile.
Obi abụọ adịghị ya, egwu na -ejikọ ndị mmadụ, ọdịbendị ma na -ahazi mmetụta ka nnukwu igwe mmadụ wee jikọta site na olu ụtọ na egwu. M na -akpọ gị òkù ka ị gaa na ibe gọọmentị nke Eurovision maka nkọwa ndị ọzọ na mbipụta 2018 na ọganihu nke afọ na -abịa.
Echefula nkọwa maka mbipụta ọzọ a ga -enwe ọtụtụ ihe ị ga -ekwu maka ya!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » General » Eurovision 2018-2019
Ndị isi ihe nkiri Spanish